Ngụkọta Mgbasa Ozi Mgbasa Ọha na-elekọta Site na 2015 | Martech Zone
Ngụkọta Mgbasa Ozi Mgbasa Ọha na Otu Na 2015
Search Engine Journal mepụtara nke atọ kwa afọ mbipute nke ihe infographic na nọgidere na-eto eto nke mgbasa ozi mgbasa ozi, na-enye onu ogugu di iche iche na ntanetị ọ bụla site na 2015. Ọ na-emepe site na nkwupụta a sitere na Gary Vaynerchuk.
Mgbe m nụrụ ka ndị mmadụ na-arụrịta ụka banyere ROI nke mgbasa ozi mmekọrịta? Ọ na-eme ka m cheta ihe kpatara ọtụtụ azụmaahịa ji ada. Ọtụtụ ụlọ ọrụ anaghị agba ọsọ marathon. Ha na-egwu sprint. Ha anaghị echegbu onwe ha banyere uru ndụ na ijigide ndụ ha. Ha na-echegbu onwe ha banyere ihe mgbaru ọsọ dị mkpirikpi. Gary Vaynerchuk
Abụ m onye na-akwado Gary V, mana ekwetaghị m na ọnụego a ziri ezi, ma ọ bụ na-akọ ya. Amaara m nke mbụ ihe ịma aka nke ịrụ ọrụ azụmahịa na mmekọrịta site na mgbasa ozi mmekọrịta. M na-echegbu onwe m banyere ndụ nke ndị ahịa anyị na ijide ha. Anyị anaghị achịkwa njikwa mgbasa ozi anyị n'ụzọ zuru oke, anyị bụkwa ụlọ ọrụ mgbasa ozi ọhụrụ!
Adababeghị m na azụmaahịa ma ebe ndị ọrụ na-eguzo na-enweghị ihe ha mere kama itinye aka na ntanetị na atụmanya na ndị ahịa. Ka anyị na ndị ahịa na-arụkọ ọrụ ma nye ha nzaghachi maka imeziwanye ojiji ha na-elekọta mmadụ, anyị na-ahụ ihe ịma aka ndị ha nwere na mbụ.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ anaghị enwe okomoko nke ịkwụsị na ngwaọrụ na ndị ọrụ ruru eru iji rụọ ọrụ mgbasa ozi ha. Ndụmọdụ dị ka njiri mmelite mmekọrịta mmadụ na ibe ya dabere na ọwa ahụ na itinye aka na ụbọchị niile ma ọ bụ naanị iru eru.
Ulo oru di ama aka site n'ibelata oke oke uru yana asọmpi na ụlọ ọrụ ha. Nke ahụ anaghị eme n'ihi na ha anaghị achọcha mmelite Facebook ha. Atụmatụ dị ogologo oge adịghị mkpa nke ukwuu mgbe ị chọrọ na-eduga ugbu a ka ịdebe ọkụ.
Ulo oru di enweghi na atụmatụ na ọzụzụ ihe onwunwe iji kụziere ndị ọrụ ha na mmejuputa usoro mgbasa ozi na-aga nke ọma. Anyị na-emepe mmemme ndị ahụ, mana ọ bụghị mmadụ niile nwere ike ịkwụ ụgwọ ego ahụ. Ekwenyere m na Gary V na ghara itinye ego nwere ike ịkọwapụta mbibi maka ụlọ ọrụ ogologo oge ma na itinye ego ga-akwụ ụgwọ. Mana imirikiti azụmaahịa na ndị were ha n'ọrụ nọ ebe etiti ugbu a.
Companieslọ ọrụ ọhụụ ewepụtara mgbe mgbe na-erite uru nke mgbasa ozi mmekọrịta. Emere ya ka ọ bụrụ akụkụ nke DNA ha site na ụbọchị ha malitere azụmahịa ha. N'ezie, azụmahịa ha nwedịrị ike gbawara n'ịntanetị n'ihi na ha bụ onye kuchiri nwa oge. Ndị ahụ abụghị ọtụtụ azụmaahịa, n'agbanyeghị. Imirikiti ụlọ ọrụ bụ ụlọ ọrụ ihe nketa nke nwere ọrịre ahịa na azụmaahịa na-aga nke ọma n'ọtụtụ afọ - na mgbasa ozi mmekọrịta abụghị akụkụ nke ngwakọta.
Enwere m mmasị n'ịgwa ndị ọdịnala, azụmahịa azụmaahịa. N'ezie, m mere a isi okwu na ndi ndu ahia n'aka ụlọ ọrụ na-ahụ maka ego na ume. Anaghị m akatọ ha maka ịbụ ndị na - eche echiche nwa oge - ha abụghị. Ihe m mere, kama, nwere mkparịta ụka na-akwụwa aka ọtọ n'àgwà ndị na-azụ ahịa na azụmaahịa nke chọrọ ka ha gbanwee.
Otu ụzọ iche echiche gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya bụ iji tụnyere ya n'ahịa na azụmaahịa ọdịnala. Ọ bụrụ na enwere ọgbakọ ụlọ ọrụ ebe atụmanya gị na-aga, azụmahịa gị ga-etinye ego n'ime ụlọ ntu ma ziga ndị otu gị kacha ike na mmemme ahụ. Ndị ahịa gị ga-esiri ike na-enye ọrụ nkwado dị mkpa yana ịme akara ọdụ gị iji dọta ndị na-agafe.
Na ihe omume ahụ, ndị ahịa gị ga-etinye mkparịta ụka bara uru na ndị ahịa na atụmanya. Ha ga-aza ajụjụ ndị dị mkpa n'aka ndị bịara mgbakọ ahụ. Ha ga - agbakwunye netwọk iji bulie oge ha ma rute na mmemme ahụ. Ha ga-akpọrịrị atụmanya na mkparịta ụka miri emi banyere ị drinksụ mmanya na nri abalị.
N'agbanyeghị ụdị mmemme ahụ, o doro anya na onye ọrịre ahịa gị ga-anọ ebe ahụ chere ka mmadụ jụọ ha ajụjụ, ma ọ bụ wụpụ n'atụle ọ bụla iji megharịa onyinye ugboro ugboro. Otu ohere di na soshal midia. Mana usoro mgbasa ozi na-enye ogbako ụlọ ọrụ zuru ụwa ọnụ nke afọ ahụ, na-agba ọsọ n'oge elekere kwa ụbọchị.
N'ime ijeri ndị ọrụ ịntanetị 3 n'ụwa niile, ijeri 2.1 nwere akaụntụ mgbasa ozi mmekọrịta na ndị ọrụ 1.7 ijeri na-arụ ọrụ
Ndị ahịa gị nọ ebe ahụ. Olileanya gị dị n'ebe ahụ. Nyocha ha na-achọ bụ ebe ahụ. Ndị na-asọmpi gị nọkwa ebe ahụ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị njem ọ bụla na-agụnye mgbasa ozi mmekọrịta, site na ịmara site na ntụgharị, n'oge a. N'ịghọta nke ahụ bụ isi ihe na azụmaahịa na-etinye ego na mgbasa ozi mgbasa ozi na-arịwanye elu, na-eme mgbanwe maka nsogbu ndị ọ na-eweta ma na-agbaso atụmatụ ndị na-abawanye nsonaazụ azụmahịa.
Nke a bụ ileba anya na mgbasa ozi mgbasa ozi na-aga n'ihu, n'ụwa niile, site na 2015:
Tags: gary vgary vaynerchukgary veeelekọta mmadụ mediaọnụ ọgụgụ mgbasa ozi mmekọrịta
Pọtụfoliyo Adobe: Wulite ma kwado Pọtụfoliyo Onlinentanetị Gị